China KUDING Tea fekitari uye vagadziri | Yibin Tea
Kuding tii ine munhuwi unovava, uye zvinonaka zvinotapira. Iine mabasa ekuderedza kupisa, kugadzirisa maziso, kuburitsa hunyoro uye kupedza nyota, kunyorova huro uye kudzikamisa kukosora, kudzikisa BP uye kurasikirwa nehuremu, kudzivirira gomarara uye kupokana nekukwegura. Inozivikanwa se "tii ine hutano", "runako tii", "uremu chai
Kudingcha, zita rechinyakare mushonga wechiChinese. Iyo mhando yemuti unogara uri wakasvibira uri weIlex holicae, unowanzozivikanwa seChading, Fuding uye Gaolu tii. Inonyanya kugoverwa kuSouthwest China (Sichuan, Chongqing, Guizhou, Hunan, Hubei) neSouth China (Jiangxi, Yunnan, Guangdong, Fujian, Hainan) nedzimwe nzvimbo. Iyo mhando yechinyakare yakachena yakasikwa hutano chinwiwa. Kudingcha ine zvinopfuura mazana maviri ezviumbwa, senge kudingsaponins, amino acids, vitamini C, polyphenols, flavonoids, caffeine uye protein. Iyo tii ine kunhuwirira kunorwadza, uyezve inotapira inotonhorera. Iine mabasa ekubvisa kupisa uye kubvisa kupisa, kuvandudza kuona uye kungwara, kuburitsa hunyoro uye kupedza nyota, diuresis uye simba remwoyo, kunyorova huro uye kudzikamisa kukosora, kudzikisa BP uye kurasikirwa nehuremu, kudzivirira cancer uye kudzivirira cancer, anti-kuchembera nekusimbisa mitsipa yeropa. Inozivikanwa se "yehutano tii", "runako tii", "uremu chai", "antihypertensive tii", "hupenyu hurefu tii" zvichingodaro. Masaga eiyo Kuding tii, Kuding tii poda, Kuding tiyi lozenges, yakaoma Kuding tii uye chimwe chikafu chehutano.
Inonyanya kugoverwa muSichuan, Chongqing, Guizhou, Hunan, Hubei, Jiangxi, Yunnan, Guangdong, Fujian, Hainan nedzimwe nzvimbo
Mabasa uye mashandiro eKudingcha anotangwa. Iine akasiyana akakosha amino acids, mavitamini uye trace zvinhu zvakadai sezinc, manganese, rubidium, nezvimwewo. Inogona kudzikisa ropa lipids, kuwedzera coronary kuyerera kweropa, kuwedzera myocardial ropa kupa, kujekesa kupisa uye kudzikisira, nekuvandudza kuona. Kubva pakuona kwechinyakare mushonga wechiChinese, Kudingcha ine basa rekuparadza mhepo uye kupisa, kujekesa musoro uye kubvisa manyoka. Iyo ine yakajeka mishonga yekurapa pakurapa kwemusoro, zino, maziso matsvuku, fivha uye manyoka.
Kudingcha inovava uye inotonhora, ichikuvadza iyo Yang uye ichikuvadza iyo spleen uye mudumbu. Izvo zvinokodzera chete kune vanhu vane kupisa kwakanyanya kunwa, senge mukanwa wakaoma, mukanwa unovava, yero moss uye yakasimba muviri, uye vanhu vane manyoka mashoma panguva dzakajairika. Muchokwadi, hapana vanhu vazhinji vakafanira kunwa Kudingcha. Kupofumadza kupisa kupisa kuchakuvadza mudumbu Yin, spleen Yang, uye kutokonzeresa kusagadzikana kwekugaya.
Ndokureva, kune vanhu vanowanzo gara muhofisi, vasina simba dumbu nemudumbu, bumbiro rakaipa, kusagadzikana kwekugaya uye vakwegura, kurwara kwenguva refu, havana kukodzera kunwa zvakawandisa kudingcha. Dzimwe nguva moto unorema, kunyange uchigonawo kuputira pamukombe weXiehuo zhizha, asi kunwa mwenje, unovava zvishoma pamutsetse.
Kazhinji zvinokura pakukwirira kwe400-800m yemupata, rwizi rwesango kana shrub. Iyo ine yakajairika inochinjika, yakasimba kuramba kumatambudziko, yakagadziriswa midzi, inokurumidza kukura, inodziya uye yakanyorova, zuva uye rinotya ivhu, inokodzera ivhu rakadzika, rakaorera, rakanyorova, yakanaka drainage uye kudiridza, ivhu pH5.5-6.5, yakapfuma muhumus kudyara kwejecha rejecha; Gadziridza kune wepakati pagore tembiricha iri pamusoro pe10 ℃, ≥10 ℃ pamusoro pegore rinoshanda rinounganidzwa tembiricha 4500 ℃, wepagore avhareji mhedzisiro hushoma tembiricha haisi pasi pe -10 ℃. Mvura inonaya inodarika 1500mm, uye hunyoro hwemweya hunokura pasi pemamiriro ezvinhu ecological anodarika 80%. Kudingcha yekukura kwenharaunda mamiriro, ingave tembiricha, mwenje kana mwando mhepo, inogona kuitika pasi pemamiriro ekunze enzvimbo dzakachengetedzwa. Naizvozvo, isu tinotenda kuti Kudingcha inogona kuenzaniswa kurima munzvimbo dzakachengetedzwa kuchamhembe kweChina. Muchirimo cha1999, Holly grandifolia akaunzwa kubva chengmai wanchang kuding purazi, chengmai County, hainan province, yekurima greenhouse kweanopfuura makore mana, iyo yakawana pachena hupfumi uye ecological mabhenefiti uye yakaunganidza imwe chiitiko chekurima panguva imwe chete
Vanotonhora vanhu vasina kukodzera kunwa, kutonhora kutonhora bumbiro hakuna kukodzera kunwa, chisingaperi gastroenteritis varwere havana kukodzera kunwa, kuenda kumwedzi uye matsva mapati haana kukodzera kunwa.
Pashure: Kudingwa tii shizha shoma
Zvadaro: GINGER CHUNMEE TI
Kudhinda Plus Tea
Kudhaya Tea Bhenefiti
Kudhonza Tea Yekurara
Kuding Tea Kurasikirwa Kwehuremu Bhenefiti